घरबाटै बिक्छन् फोहोर,कस्ता फाेहाेर कतिमा बिक्छन् ? विद्युतीयको मूल्य सबभन्दा महँगो - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
घरबाटै बिक्छन् फोहोर,कस्ता फाेहाेर कतिमा बिक्छन् ? विद्युतीयको मूल्य सबभन्दा महँगो
काठमाडौं । तपाईंका घरमा दैनिक एक किलोभन्दा बढी फोहोर उत्पादन हुन्छ ? फोहोरका रूपमा के–के फाल्ने गर्नुभएको छ ? प्लास्टिक, सिसा, फलामका टुक्रा ? वा कुहिने फोहोर र बासी खाना पनि ? यिनलाई छुट्याउने र टोलछिमेक मिलेर संकलन गरेर राख्ने हो भने सबै बिक्छन् । काठमाडौंमा यस्ता संघसंस्था छन्, जसले घरमै आएर फोहोर किन्छन् । फोहोर बजारमा विद्युतीय फोहोरको मूल्य सबभन्दा महँगो छ ।
टेकुस्थित एकीकृत पुन:प्रयोगीय वस्तु संकलन तथा प्याकेजिङले पनि घरघरबाट छुट्याइएको फोहोर संकलन गर्दै आएको छ । यो संस्थाले उपत्यकाबाट दैनिक तीन ट्रक (करिब २ टन) फोहोर उठाउने गरेको छ । तीमध्ये एक ट्रक काम लाग्ने वस्तु छानेर बेच्ने गरेको संस्थाका प्रबन्धक रघुनन्द तामाङले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
International Nepali Literary conference begins in Japan
The Fourth edition of the international Nepali literary conference is being organized by the […]
काठमाडौं । ‘भन्नलाई भिआइपी बस्ने एरिया रे सार्वजनिक यातायातको हालत भने यस्तो छ। साझा बस पनि जम्मा दुर्इ वटा […]
मन्त्रिपरिषद् बैठककोे यस्तो निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले नेपालको संविधान जारी भएकोे दिन असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ […]
ओलीले किन भेटे ‘फ्री तिब्बत’ पक्षधर कर्मालाई ? भेटले कुटनीतिक वृत्तमा तरङ्ग
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर धर्मगुरु मास्टर कर्मा तन्पाई ग्यालसेनसँग […]
सप्तकोशीमा पानीको बहाव यो बर्षकै उच्च भएकोले ३३ वटा ढोका खुला
साउन २९ ।इनरुवा, पूर्वी पहाडी तथा तराईका केही जिल्लामा भएको अविरल वर्षका कारण सप्तकोसी नदीमा पानीको बहावमा […]